World March na Alpe Adria - Marchwa Maachị
Home » Noticias » Pịa Ihe edeturu » World March na Alpe Adria
World March na Alpe Adria
13 / 02 / 2020 13 / 02 / 2020 site Antonio Gancedo
Ngosiputa nke abali abuo nke uwa maka udo na ogba aghara na Alpe Adria na Satọdee, abali iri-ise nke onwa na Café San Marco, na Trieste
2ndbọchị nke abụọ nke Mach maka Udo na Ọgba aghara 2019-2020 ga-akwụsị site na February 24 ruo 27 na Alpe Adria, n'etiti Croatia, Slovenia na Italy, ebe ngwụcha izu a ga-abụ na Berlin, Prague, Paris na Vienna.
A ga-ewetara ọha na eze akwụkwọ mgbasa ozi maka World Peace maka Alpe Adria na Satọdee, Friachị 15 na elekere 11 nke ụtụtụ na ụlọ ahịa kọfị na San Marco na Via Battisti 18.
Ndị nnọchi anya ndị na-akwado mgbakwunye ahụ ga-esonye na ngosi ahụ, dịka Municip nke Umag (Croatia) Piran na Koper (Slovenia) Muggia, San Dorligo - Dolina, Fiumicello - Villa Vicentina, Aiello del Friuli na Mpaghara Njikwa nke Ndị Isi Ochichi maka Udo na ikike ndi mmadu.
Ndị na-ekwu okwu ga-agụnye onye nnọchi anya onye isi obodo Umag Mauro Jurman, onye Austrian pacifist Alexander Heber, Monique Badiou nke kọmitii nkwalite Fiumicello, onye nyocha Cern na Geneva Fulvio Tessarotto, onye bụbu onye ntụzi ọrụ nke Ọrụ Ọrịa Ọrịa Roberto Mezzina, otu ndị otu ahụ. nke icallọ akụ na-arụ ọrụ na Paola Machetta, onye isi obodo nke Aiello Andrea Bellavite.
Akpọwo ya oku ịbịa sonye na ọtụtụ mkpakọrịta na-akwado atụmatụ a, Mondosenzaguerre kwalitere na Trieste na enweghị ihe ike na Kọmitii Udo na Coloistence Danilo Dolci. Anyị chọkwara ikele Coop Alleanza 3.0 maka nkwado ha.
World March ga-akwụsị na February 24 na Umag, na February 25 na Piran, na February 26 na Koper, Muggia / Dolina na Trieste, na February 27 na Trieste na Fiumicello - Villa Vicentina.
Na Sọnde, Febụwarị 16, a ga-eme njikọta Internetntanetị n'ụtụtụ ya na ndị ngagharị iwe na ndị na-eme ngagharị iwe si Vienna.
Na vidiyo a, ọrụ mara mma nke Tele Koper, nke May 25, 2018 nyere nkọwa nke mbido ahụ site na itinye uche pụrụ iche na ọdụ ụgbọ mmiri nuklia, Trieste na Koper.
Draft: Alessandro Capuzzo
Foto a dị n’elu na-anọchite anya akara mmadụ nke Udo, nke mere na Piazza Unità nke ndị sonyere na Mgbakọ Worldwa Mbụ, na November 7, 2009.
March na Marchpo .po
Nzuko na International Peace Bureau